Jobs for Pakistani in UAE 🥇 【We are hiring in Dubai and Abu Dhabi!】
Tanga neChitatu Recruitment Company ku Dubai
Jobs for Pakistani in UAE kambani yedu yakasiyana. Isu tiri zvakawanda zviri nani pane mamwe makambani anotungamira muAFA. Uyezve, kambani yedu yakavambwa mu2016 uye yakatanga mabasa anoshamisa muUnited Arab Emirates. Yedu yekuhodha kambani vashandi vanoziva recruitment consultants in Dubai uye yakanakisisa HR nyanzvi munyika dzeGCC.
Dubai City Kambani ndeimwe ye inokurumidza kukurumidza Dubai agency muMiddle East, Asia, neCanada. Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi, zvimwe zvacho Vanotsvaga basa reAsia tiri kushandisa kambani yedu muAFA. Kupfuura 80% vavhimi vebasa kuva mukana wokubudirira mu Dubai.
Iko kuiswa kweAsia Recruit kunopindirana nezvinodiwa mumusika wemakwikwi. Dubai Kambani Kupa vashandi mhinduro kune vakawanda vane mukurumbira vatengi. Uye kupa basa uye kukura mikana kune vakawanda vavanoda. Kambani yedu inowanzo taura chikamu chemasangano emahara makambani muDubai Guta. Kupiwa aya mapoinzi, Middle East neAsia muchiuto mabhizinesi mirairo inoshamisa yakakonzerwa muUAE. Zvisikwa zvinobatsira kuwanda kwekutsvaga basa kunotsvaga mu Dubai uye Abu Dhabi.
Nokudaro mapurogiramu edu ekutsvaga mabasa anoshandiswa zvakananga. Kungosvika kune kupa rubatsiro pakutsvaga basa muDhaibhai kuMuIndia. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, kambani yedu inopa imwe yakasiyana basa uye makambani e Dubai. Mikana yevashandi vane ruzivo muUAE vakamirira vashandi vekuPakistan basa kuMiddle East.
Upload Resume for Dubai Kuno!
Tiri kumirira CV yako yakarongwa
Dubai inoshamisa uye inoshamisa!
Pamusoro pazvo, kambani yeDaily City Company yakashanda. Range riri kushumira basa ravanotsvaka kwete chete Dubai munharaunda yemotokari mabasa. Asi sezvakaratidzwa tiri kuunganidza vashandi vemunyika dzakawanda vanobva kuIndia zvinosanganisira vanotsvaga basa reAsia. Pakistani vanotsvaga basa vari unogamuchirwa muUAE uye isu tiri zvirokwazvo haisi kungogumira kuUAE chete. Panguva imwecheteyo, isu tiri kutsvaga vari kukwikwidza kubva kuQatar, China uye zvichidaro zvakare vabati vekuHong Kong. Naizvozvowo vanotsvaka basa kubva kuSouth Africa. Pamwe chete neUSA uye Singapore. Uyezve, isu tiri kubatsira expats kubva kuIndonesia. Uye Malaysia vashandi vekushanda vanogamuchirwa kupfuura mu Dubai.
Dubai jobs with a visa haisi chete inowanikwa kune vashandi vomunharaunda. Kana iwe uri kubva kuPakistan unogona kuwanawo basa rinobva ku Dubai City Company. Nechinangwa chekutsvaga basa muDubai. Chikwata chedu chiri kutsvaga mukwikwidzi muUnited Arab Emirates. Uye kuisa vashandi vePakistan muDubai City Makambani. Nezvo izvi mupfungwa, isu tiri kutarisira kukuisa iwe kune mikana mitsva muDubai.
Dubai ndiyo yakanakisa nzvimbo yebasa reInternational. Huwandu hwekushaikwa wakaderera zvakanyanya muDubai. Saka iwe unofanirwa kuedza kushandisa sevhisi yedu uye kutama kubva kuPakistan. Paunonyorera nezvedu kambani iwe unogona kuwana nyore nyore muMiddle East. Kubatanidza ne maneja weHR uye maRecruiters maitirwo eiyi nzira yekutsvaga basa renzvimbo. Saka usatambisa nguva yako uye upload inotangazve nhasi.
Isu Tirikukurumidzira Kukura Kambani muUAE
Sezvineiwo, tiri mamwe emakambani akanaka kwazvo muAFA. Isu tiri zvakare rakazara marezenisi ekutora basa kuDubai timu yedu ine ruzivo rwakakosha muAU. Vanotsvaga vanotsvaga kubva kuPakistan kutsvagisa Gulf Jobs. Nebasa rinokosha rekutsvaga rinobvumidza Pakistan vanhu vanouya kuzotsvaga basa kuUAE. Tichifunga izvi, kambani yedu iri kuyedza kuburitsa manipower. Kubva Pakistan kuenda mhiri kwemakungwa nhungamiro dze expats mu Dubai.
Kuti uzviise nenzira imwe, Dubai City Company kubasa mabasa. Inopa huwandu hwe basa rinobatsira vanotsvaka basa kubva kuPakistan. Tiri kushanda nemakambani anopfuura 6,000 HR ari kuDubai neA Abu Dhabi. Pamabasa ekuisirwa zvachose muDubai. Zvakakosha kuti tizive zvedu Kuiswa kwebasa kunosanganisira kubvumirana vashandi. Pamwe chete nekushanda kwenguva pfupi kwemakambani emuno muDubai uye Abu Dhabi. Kuwedzera, isu tiri kushanda pane yekudyidzana kwenyika dzese kuber uye taxi yemusika.
Nezvibodzwa zvakafanana zvinopihwa nekambani yedu. Ranging kubva kudiki Asia kune makambani Emirates. Kusvika kumasangano makuru emarudzi mazhinji muGCC Nyika. Kunge Bahrain yechokwadi ine zvinoshamisa Qatar. Wedu Dubai makambani ekuunganidza michina yakasiyana-siyana. Zvakadai samafuta & gesi muDhaibha uye Abu Dhabi. So Jobs for Pakistani muUAE inogona kunge iri muruoko rwako.
Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi teknolojia yehutano inoshanda muBud Dhabi. Nokuti Pakistani muUAE yakakwirira yakakurumbira kune vachengeti vekuvhima kune dzimwe nyika. Kune rimwe divi, bhangi & rezvemari basa rePakistan. Zvakare, vakuru vevatungamiriri vanowanikwa muAAE. Panguva imwe, hutano hwebasa mikana yekuDubai yakaoma kuwana. Asi zvichiri kugona kana tsvaga chaiyo yekutsvaga basa iri refu. Pasina kutaura zvekugadzira mikana yekutanga. Pamwe chete nezvekuvaka uye zvinhu uye mabasa ekufambisa muEmirates.
Unhu hwakawanda hunogombedzera hwevanoda kukwikwidza kubva Pakistan. Icho chiri nyore kuwana ndeye call Center mikana. Unogona kushandisa semuenzaniso Dubai WhatsApp Groups. Kune nzvimbo dzakawanda apo vashandi vePakistan vanogona kuiswa ku Dubai.
Padivi rakashata rinofanira kurangarirwa. Zvakawanda vakawanda vanyori vachirota nezve Dubai. Mazuva aya achienda kuEmirates aine hunyanzvi hwakawanda munzvimbo dzeEinjiniya. Information Technology (IT) jobs in Dubai for Pakistani anowanikwa kana iwe ukaisaina nekambani yedu. Nezve izvi mundangariro pane yakanaka chikamu. Unogona wana mukana wakanaka kwazvo weKutengesa & Kushambadzira Mutengi Sevhisi chinzvimbo. Mari & Accounting pamwe neBhangi HR & Administration basa muEmirates. Nenzira imwecheteyo, kana uchibva kuPakistan basa rekutsvaga iwe wePamusoro Management & Corporate Strategy.
Iine yakakura network networking yekubatana. Pakistan vanotsvaga basa ku Dubai Companies. Kune chimwe chinhu, chakabatanidzwa neyedu ruzivo rwehunyanzvi pamusika we Middle East. Kune rimwe divi, isu takaisa vatungamiriri vePakistan muUAE. Vazhinji vedu vane ruzivo vekupa mazano vanotsvakira Mabasa ku Dubai yePakistani. Mabasa epamhepo muDubai haasi nyore kuwana. Kana uchigara kune imwe nyika. Asi imwezve pfungwa inokosha iyo isu yakazvipira kuti tiitire veAsia basa rekuvhima. Kuri kungopa iyo yepamusoro sosi yekuvhima mabasa maererano nemaitiro akajairwa. Kune vatengi vepasi rese. Ndiani anogara mukati Middle East uye Asia kune vashandi uye vanotsvaka basa.
Tichishanda nekambani dzedu dzepaPakistan vanhu vanotora basa idzva rinopa. Zvinyatsojeka kutsvakurudza uye kunobatanidza nekambani yekutsvaga. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, vadzidzisi vedu vanogadzirisa basa. Pane imwe neimwe curriculum vitae kukwanisa kukodzera mumwe nomumwe mubasa rekupa basa. Pakupedzisira kutsva kwekuita kwekuiswa kwebasa redu kwekutsvaga kubva kuAsia kusvika kuA Dubai. Izvo zvinotibvumira kupa vateereri vedu mabasa anoshamisa ku Dubai. Takaita zvinhu zvese zvinotariswa kana munhu achitsvaga basa paachagadzira tsika pawebsite yedu. Ndokumbirawo uise kuti utangezve se Dubai Guta riri kuita zvinoshamisa kukura.
Kuisa vateveri vePakistani muDaily City
Sezvakaratidzwa isu tiri kupa mvumo kune vose vanobvumirwa. Ndiani anoda kutitengesa kushanda uye haawani basa. Basa redu rekambani iri kungochengetedza nguva. Kune vose vanobvumirwa nevatengi. Kuzviisa kubva kuPakistan kusvika kuA Dubai. Nzira yedu iri nyore kwazvo nokuti kutumirwa vatungamiri kubva kuPakistan kusvika kuDhailand. Izvo zviri nyore uye zvakawanda zvakazara kubvira 2009. Mumakore ekupedzisira kunzwisisa kweMiddle East customer's needs. Uye vatsva vanobva kune dzimwe nyika kune dzimwe nyika vanoda basa muUAE. Ndizvo zvatinoita zvakanyanya muBud Dhabi.
Zvichipiwa pfungwa idzi, unyanzvi hwevatariri uye zvido uye ruzivo pamusoro peMiddle East. Achaita kuti tive nechokwadi kuunganidza tarenda yakanakisisa kuDaily City makambani. Tiri kushanda mukati mekutengesa uye kutengeserana muUAE. Kubatsira zvakare makambani IT kubva kuKatar anotora vatengi. Isu tiri kushanda pamwe nemakambani mashomanana muSaudi Arabia. Mukufamba kwenguva, isu tiri kuisa vanhu muDhailand.
Jobs for Pakistani muUAE - Kambani yedu inogona kukubatsira kuwana basa kubva kuPakistan !. Upload CV nhasi! Dubai iguta rebhizinesi!
Jobs for Pakistani in UAE unogona kuzvitora!
Pfungwa iripo ndeye Dubai City Company Kutaurisa kubva Pakistan. Isu tiri ikozvino kubatsira vatengi mukati memakambani anokunda muDubai. Isu tiri chirongwa chekugadzirisa pamwe nemakambani ePakistan. Uye kugara uchitsvaga matarenda kubva kuPakistan. Vanyowani vedu vatsva vari kugadzirisa mabasa kuburikidza nemabasa akanaka anobatsira zvakadai se WhatsApp.! Kune vatariri vanobva kuUAE. Izvo hazvina matambudziko kubva kupi.
Hazvina mhosva pasinei kupi anotsvaga iye zvino ari kurarama. Kune zvakawanda mikana yebasa yeIndia vanotsvaga basa. Uyezve zvakare maSouth Africa uye kunyangwe maAmerican expats anokwanisa kuwana basa. Saka, hapana chikonzero chakanaka chakanyanya. Anenge chero munhu anogona kuiswa muDubai. Vanhu vatsva vanogona kuiswa muEmirates, zvisinei kuti unenge waudzwa chii kwauri. Dubai City Kambani zvirokwazvo iri pano kuisa vashandi vatsva muAFA. Kazhinji kutaura, vatengi vedu vazhinji vakatarisa kumakambani aya ari kuhaya. A Careerjet muDaily website uye Monster Gulf kambani Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Nhungamiro yePakistan Basa Renyanzvi
Mabasa muDubai ePakistan akaoma kuwana. Saka vanhu vePakistan vanofarira kushandisa kambani yedu. Makambani muDubai akakosheswa Vashandi veAsia uye hapana dambudziko nedhiza. Isu takagadzira Dubai Guides uye kuzivisa kwevakuvhimi veAsia basa. Vatsvaki vanotsvaga vanogona ikozvino kushandisa edu maerekisheni eDubai. Mabasa ePakistan muAFA anogona kuwanikwa nesu.
Kune rumwe rutivi, unogona shandisa basa rekushandira foni. Kune vatsva vakawanda kwazvo vari kuuya kuDubai. Kwete hazvo kuwana basa, mamwe acho expats anouya kuDubai. Kwete kutsvaga basa muUAE. Ichi ndicho chikonzero kambani yedu yakagadzira Dubai gwara uye ruzivo. Kubatsira vanotsvaga basa kutsvaga basa vasati vatomboenda kuEmirates.
Pane Complete guide yekuenda ku Dubai uye kuwana basa. Vatsva vekutsvaga basa vari kungovavarira zvakaoma kuti vawane basa. Uye Dubai City Kambani iri pano kubatsira chero mutorwa ari kutsvaga basa. Yedu WhatsApp Dubai mapoka anoshanda kwazvo kune wese. Iyi nzira yakangwara yekuiswa muUnited Arab Emirates.
Basa idzva muGulf Countries
VaPakistan vanogona tsvaka basa zvakare semukuru muhotera ku Dubai. Saka iwe se expat iwe unogona kutsvaga basa mumapato akati wandei. Asi iyo yakanakisa ndeye TCS yekushandira kambani. Ukuwo, kwete Dubai chete yekuhaya, kune akawanda dzimwe nyika ari kutsvaga kuisa vanotsvaga basa. Kune akati wandei makambani muSaudi Arabia kuunganidza basa vachitsvaka.
Shanda munyika dzeGulf inobhadharwa kwazvo. Semuyenzaniso, highly paid banking jobs in Dubai. Kune mikana yakawanda yevanhu vatsva kwete muGulf chete. Uyezve, mamwe makambani emarudzi munyika yeEurope neUnited States achibhadhara kubva kuDaily City. Imwe yepamusoro Makambani ekubhadharira Dubai iGoogle. Iko kune dzimwe nyika dzakawanda dzakawanda dzinobhadhara misha mitsva.
Nzira yakakurumidza yekuwana basa muEmirates sechitsva. Kazhinji kutaura ndekuve ne MBA dzidzo kutanga basa. Sezvineiwo, iyo nzira yakanaka ndeye kuve nedzidzo yemuno. Iyo yakanaka kubva kuDubai kana Abu Dhabi University. Semuyenzaniso unogona kuwana basa muDubai Mall. Inoshanda chaizvo kune vekunze vekunze.
Mabasa ekutanga sePakistani muDhaibha
Imwe nzira yakanakisisa yekutanga basa mu Dubai. Kazhinji kutaura kune tsvaka kushambadzira basa mu Dubai. Panguva ino pane zvakawanda vashandi vokuSouth Africa muDhaibha. Kutanga kutsvaga basa muDhaibha tinokurudzira zvakasimba kufamba kwekukurukurirana. Kubuda kunze nekudzokorora patsva uye kutaura nevatungamiriri vekutora vanoita sechinhu chakanaka.
Somuenzaniso, kutsvaga kunogona kuwana basa semudzidzisi muDhailand. Kupa ruzivo urwu iwe unofanirwa kuziva kuti ungagadzirisa sei basa rako kutsvaga. Kunyanya mune imwe yei nzvimbo yakanakisisa kune vanotsvaka basa. Uye nzvimbo ino ichokwadi United Arab Emirates. Saka, muchidimbu chipfupi Jobs for Pakistani in UAE rakavhurika kwazvo Mabasa ePakistan muDubai City. Kazhinji kutaura, isu tiri kuhaya muDubai kumusika we Middle East. Isa CV kukambani yedu uye mirira kupihwa basa.
Isu tiri izvozvi kunyorera Mabasa muDubai!
Iwe unoda kuwana a Jobho mu Dubai? kunyange izvi zvingava zvechokwadi tinogona kukubatsira Iwe kutanga nutsva basa muUAE mu 2018!
Dubai City Company izvozvi kupa magiraidhi akanaka kune Mabasa muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Dubai expats. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.